Illinois Cannabis Kuwedzeredza - Maitiro ekunyanyisa cannabis zvibodzwa
Kupararira uye Illinois Cannabis
Illinois Cannabis Kuwedzerwa uye Kuenzana Kwemagariro Kunotsanangurwa
Zvemagariro Evanhu & Cannabis Kuwedzerwa
Illinois Cannabis Kuwedzeredzwa iri kuuya kune vanhu avo vakasungirwa kugovera kusvika pamakumi matatu emakumi magiramu) ichave yakadzingwa kamwechete cannabis zviri pamutemo muIllinois. Isu tinovhara mutemo mune ino chinyorwa uye tinokupa iwo madetaire.
Kusvika pa 800,000 vanhu muIllinois vachakodzerwa nekutsakatiswa yeavo akamboita "madiki cannabis kukanganisa" uye mashoma dzimwe mhosva pasi pechikamu 4 ne5 zveIllinois Cannabis Control Act.
Mune ino peji, isu tinopa huwandu hwakawanda hwehuwandu hwekuti ndezvipi zvinogona kukanganisa cannabis uye kuti izvo zvinokanganisa sei chimiro chako semunyaradzi wechikwereti mumunyori mutsva muI Illinois cannabis indasitiri.
Maitiro ekutsanangura cannabis zvibodzwa muIllinois
Tora zvinyorwa zvako zvekusungwa, dzimwe nguva zvinodaidzwa kuti "rap sheet", zvekusungwa kwako kana kubvumidzwa & tarisa kana akakodzera.
Kuburitsa kusvika 500 gramu, kana kufunga kugovera kusvika pamakumi matatu emakiromita akakodzera kukurudzira pasi pemutemo mutsva weIllinois cannabis.
Fonera kiriniki yako yemubatsira pamutemo uye utore pfungwa pane rekodhi yako kuti utange maitiro ekuwedzera izvo zvinoda basa rekuwedzera.
"Diki dzeCannabis Mhosva" dzichango vhuriswa, asi izvo zvinongova ne cannabis inosvika eunzi (30 gramu).
Endesa chikumbiro chekuwedzera nehofisi yemunyori wedunhu.
Enda kudare redzimhosva kana paine chinopesana ne yako Illinois Cannabis Kutaurisa chikumbiro chakatumidzwa neHurumende
Ita kuti dare ripe chikumbiro chako kuti upinze mhosva yako ye cannabis kana kusungwa.
Mapurisa emunharaunda nemapurisa ehurumende vanofanirwa kupaza rekodhi yako, iyo inogona kutora mazuva makumi matanhatu mushure mekuraira.
Heino chinongedzo kumushumo kubva kuColorado unoratidza kudzora kwevasungwa & DUIs mushure mekunyorwa kwemutemo we cannabis.
Cannabis Kuwedzeredzwa uye Zvemagariro Ekuenzana muIllinois
Illinois Cannabis otomatiki Kuwedzeredzwa Kwemudiki Cannabis Zvikanganiso
(G-5) "Mudiki Cannabis Anokanganisa" zvinoreva kutyora
yeChikamu 4 kana 5 cheCannabis Control Act
nezve kwete anodarika makumi matatu emakirogiramu ezinhu chero chipi zvacho
ine cannabis, chero kukanganisa kwacho kwaisaita
sanganisira kurudziro yechirango pasi pechikamu 7 che
Cannabis Control Act uye haina kubatana ne
kusungwa, kupomerwa mhosva kana kumwe kufunga nezvechisimba
mhosva sekutsanangurwa kuchikamu (c) kweChikamu 3 che
Kodzero dzeVakaparwa Mhosva uye Zvapupu Zvinoita.
Pfupiso Rondedzero Yekuwedzerwa kweCannabis mu Illinois
Zvemagariro Ekuenzana Kwevanhu
Makumi maviri ezviuru zvezviyero zvako zvekushandisa
Zvinhu zvitatu kune Zvemagariro Ekuenzanisa Vanyoreri
Gara mu "Nzvimbo Yakasvibiswa"
Kusungwa ne "mhosva yakakodzera kunyururwa"
Vashandi gumi venguva yakazara vane makumi mashanu neshanu kubva muzana 10 kana 51
Zvikanganiso Zvakakodzera Kuremerwa pasi pemutemo weCannabis
Madiki cannabis kukanganisa
Kwete anopfuura makumi matatu gramu
Hapana chirango chinowedzera
Kuputsa kwechikamu chechina kana che4 cheCannabis Control Act
Misdemeanor kana Kirasi 4 Felonies
Canannis Kudzora Mutemo - Kirasi 4 Felony
Chikamu 4 - Possession
Chikamu C - kusvika magiramu zana
Kutevera mhosva - Chikamu 4 Felony
Chikamu D - 101 kusvika 500 gramu
Kutadza kwekutanga chete - Kirasi 4 Felony
Kutevera mhosva - Chikamu 3 Felony
Chikamu 5 - kugadzira & kufarira kuburitsa
Chikamu C - gumi kusvika makumi matatu gramu
Kirasi 4 felony
Tsika clause yeChikamu 135 chinobva chashanda
Kana iwe uine rekodhi yemhosva, saka iwe unofanirwa kutamba pasi pemirau dzakasiyana kuratidza kuti wakagadzirwazve
Saka kana iwe uchikodzera kuve mushandirapamwe wekuenzanirana chikumbiro nekuti iwe wakazviita nemaune, pamwe hazvizoshanda zvakanaka.
Mifananidzo kubva kumutemo wekuongorora kwako pane zvemagariro zviyero zvevanhu kuwedzeredzwa kwekutadza kwe cannabis.
Kuwedzerwa kwekusungwa kwe "Zvishoma Cannabis Zvikanganiso" muIllinois
Uyezve paza misdemeanors kana felonies pasi peIllinois Cannabis Control Act's Chikamu 4 na5
Heano zvimwe kubva pamutemo maererano nezvimwe cannabis kukanganisa uko kwakakodzera kuti utsakatise muIllinois.
Kuwedzerwa uye Kuenzaniswa Kwemagariro muIllinois script
Mhoroi, ndiri Thomas Howard Gweta re cannabis iwe unogona kuwana kune cannabis Viwanda Lawyer.com chinhu chepamhepo chinyorwa chemibvunzo yako pamusoro pekupinda uye kushanda mune yepamutemo cannabis indasitiri. Nhasi, isu tine inopisa musoro mune cannabis - zveruzhinji kusaenzana. Illinois akataura zvakajeka kutora hukama pakati pemutemo wavo uye vakagadzira zvikanganiso zvakakodzerwa nekumisikidzwa izvo zvinokodzera vanhu sevanhu veruzhinji vanonyorerana mukana.
Chikamu chezvemagariro chevanhu checannabis rezenisi chinoita 20% yemapoinzi ezvako application uye kune nzira nhatu dzekuwana nadzo. 3) anogara munzvimbo ine Dispropionalely Impacted Area, 1) asungwa kana kuti atongerwe mhosva yaakakodzera kudzimirwa pasi pemutemo mutsva we cannabis, kana 2) shandira kambani ye cannabis ine vashandi vanokwana gumi yakazara nguva kubva kunhamba 3 kana 10. Izvo zvaive yenzvimbo dzekuenzaniswa kwemapoka, uye kwete vanyoreri - nekuti ipapo iwe ungadai wakada huwandu hweuridzi uye kutonga kune mapepa ekutanga uye maviri.
Isu tiri kungo tarisa izvozvi pane izvo zvinokanganiswa zvakakodzera Zvii izvo? Iyo Cannabis Regulation uye Mutero Mutemo (iyo "CRTA") inovagadzira nekutsanangura mutsva mutemo wepamutemo wehunyanzvi, iyo "diki cannabis mhosva," uye kugadzirisa iyo cannabis kutonga chiitiko kuti ibatanidze zvese kuve nezvakawanikwa uye nechinangwa chekugovera chero nguva yaive misdemeanor kana kirasi 4 felony.
Imhosva diki yei cannabis? CRTA inozvitsanangura sekutyora kwechikamu chechina kana che4 cheCannabis Control Act yeasingapfu 5 magiramu e cannabis, chero bedzi isingabatanidze kuwedzera kwechirango pasi pechikamu chechinomwe che cannabis kutonga chiitiko - kunyanya chisimba kuwedzera kutengesa kana kuve ne cannabis.
Mutemo mutsva unodzinga wega madiki makanganiso eanokanganisa, ayo anogona kukoka kupatsanurwa kwemasimba kupokana nekuti gavhuna chete ndiye anokwanisa kuregerera vatadzi - izvo zvingangofungidzirwa kuti JB Pritzker aizoita sezvo iri iri Bhiri raakatsigira nekusayina. - Zvichida kusaina bhiri iri aiveregerera - kutaura zviri pamutemo.
Kuvhiringidzika kunomuka pamwe nezvimwe zvinogumburwa zvinokanganisa izvo zvinoda mamwe mapepa, uye masimendi ekupedza muna2020, kuti ubve pane chako. Iyo CRTA yakapa kuti kwete zvidiki zvinokanganisa cannabis zvinogona kubhadhariswa, asi zvakare misdemeanors uye kirasi 4 felonies pasi pezvikamu 4 uye 5 zveCannabis Control Act.
Chikamu chechina cheCannabis Control Act inobata nezvekubata, uye iwe unogona kubatwa uine mazana mashanu emakumi mashanu (iyo ipfuure pani imwe chete) yemapepa asina kunyorwa kamwe chete - asi kubatwa zvakare nayo imhosva huru, kirasi 4 felony yekuzotevera mhosva. Iwe unogona kubatwa nemakumi matatu kusvika zana emagiramu imwe inotevera nguva uye kuve nayo ichave Class 500 felony. Saka kana iwe ukabatwa ne pondo ye cannabis kamwe chete, iwe unogona kuiwana yakadzingwa - zvisinei kana izvo zvikaitika…
Iwe pamwe wakabhadharwa pasi pechikamu che5 cheCannabis Control Act nechinangwa chekuparadzira, zvakanyanya kufunga kutengesa iyo cannabis. Kana iwe uri kubhadharwa neizvozvo, huwandu hwe cannabis hwakaderera. Kubhadharwa nechinangwa chekugovera zvinopfuura gumi asi zvisingasviki makumi matatu gramu ye cannabis kirasi 10 felony, uye pasi pegumi gramu ndeye misdemeanor. Giramu makumi matatu inongoda eunzi chete, iro rinogona kunge riri pasi pemadhora mazana mashanu kumahofisi ako emunharaunda, uye zvakare mutemo wepamutemo pasi peCRTA. Pamwe kwete fungidziro yekuti huwandu hwepamutemo hwekuva nemari yakaenzana iwe unogona kudzoserwa mukuyedza kuendesa.
Idzi shanduko dzinosimudza zvinhu zviviri mupfungwa dzangu. Kutanga, kuchave nekubatwa kwakawanda kwevasungwa munguva yepamberi nekuti pamutemo chikamu chemuridzi chimwe chinogona kupfuurika, kana vanhu vanotanga kubhadhara mabheji avo nemabhenji uye kubatwa vachiyera giramu uye vachirikwidza - asi izvi zvidiki-diki zvinovhiringidzika vese vanokodzera kudzamisirwa, uye chechipiri, mhedzisiro yekusungwa kunoenderera mberi ichave yekuti masaisai ezvekudyidzana vanonyorerana vachakura - kunyanya kana vanhu vachironga zviitiko zvekodzero dze cannabis munharaunda dzakasiyana siyana dzave kutanga kupa zvisungo zvinorambidza bhizinesi re cannabis mune yavo. nharaunda - Hazvina hushamwari hwemhuri kubata vanhu kuita chinhu chakachengeteka uye chine hutano kupfuura doro kana fodya - kana kunyangwe chikafu chinokurumidza. Asi kusungwa uku kuchakurumidza kudonha sezvavakaita muColorado mushure mekunyorwa kwemutemo.
Vakadonha zvakaipawo, tarisa kwete chete kusungwa kwembanje muColorado, asiwo nezvakafadza kuDUI kusungwa - ivo vakawa zvakare nenhamba mbiri. Zvimwe, ndakasiya mushumo wepamutemo kubva kuColorado mune chikamu chetsananguro uye zvakare chakabatanidzwa pane ino peji rewebhu.
Kana iwe uri munhu akabatwa nechimwe chezvinhu izvi zvinoputika uye unoda kupinda muindasitiri ye cannabis - inzwa wakasununguka kutarisa webhusaiti yangu kana kundipa runhare.